INVENTORS BLACK ARAKA FAHALALANA Archives - AFRIKHEPRI
Afrocentrism: ny tantaran'ny Afrikana eo anelanelan'i Egyptiana sy Amerika
tuesday, 14 jolay 2020
Fifandraisana Sokajy FAMPIANARANA SY FISORONANA MASINA
FAMPIANARANA SY FISORONANA MASINA
Qelasy, tabilao fanabeazana natao tany Ivory Coast
Qelasy dia midika hoe "kilasy" amin'ny fiteny Akan. Ny takelaka dia natao ho an'ny tontolo fanabeazana. Izy io dia takelaka fanabeazana izay hanolotra rindrambaiko sy fitaovana ho an'ny ...
Henry Sampson, mpamorona afrikana amerikanina ny telefaona finday
Henry Sampson no mpamorona ny telefaona finday, satria avy amin'ny famoronana azy "sela Gamma herinaratra" (patanty natonina tamin'ny 6 Jolay 1971 teo ambanin'ny n ° 3591860) izay mamela ...
Ny soratra nosoratan'i Vaï dia noforonin'i Momolu Duwalu Bukele tamin'ny 1833 tao Liberia akaikin'i Cape Mount. Izy io dia namboarina avy amin'ny ideolojia taloha nampiasaina 200 taona talohan'izay. Ity fanoratana ity no mamaky ...
Tango mainty mainty
Ny vondron'olona mainty vokatry ny fanandevozana dia maneho lanja lehibe ao amin'ny fiarahamonina Portègne ao amin'ny Río de la Plata, nandritra ny taonjato faha-XNUMX ary hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Ny fiafaran'ny fitondran'i Juan Manuel de Rosas tamin'ny ...
Côte d'Ivoire manana manodidina ny 600 Betes. Tsy ampianarina any am-pianarana ny fiteniny, izay misy olona mianatra teny frantsay. Tamin'ny taona 000, Frédéric Bruly Bouabré, avy amin'ity vahoaka ity, ...
Aloavy amin'i Wabeladio Payi, ilay namorona ny soratra nataon'i Mandombe
Wabeladio Payi avy any Congo-Kinshasa no mpamorona ny soratra Mandombe. Ny teny Mandombe, amin'ny fiteny Kongo, dia midika hoe "mainty". Nanomboka ny taona 1978 ny fitsangatsanganana an'ity fanoratana ity….
Akon dia namorona "Akon Lighting Africa", akademisiana solar iray hanome hazavana ho an'ny Afrikana 600 tapitrisa. Ilay mpihira dia nanamafy ny famoronana ity oniversite ity ...
Clément Shala, Kongoley avy ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (DRC) dia namolavola electro-brazier izay noforoniny avy amin'ny faritra nanavotana. Vita ny motera ...
Ny mpianatra Ogande dia mamorona fampiharana finday izay mamaritra ny tazomoka
Tapitra ny fitsirihana ra. Ny revolisiona nomerika izao dia mamela ny fitiliana… miaraka amin'ny finday! Ny fampiharana finday iray izay manao diagnostika ny tazomoka dia ...
Ireo mpamorona sy manam-pahaizana mainty hoditra
Mpanorina sy mpahay siansa mainty: Ity misy boky misy lohateny manaitra, mpamorona mainty sy mpahay siansa. Mahagaga satria manohitra ny sary izay misy mainty izay hodinihinay ...
Tamin'ny 16 taona izy dia niteraka fahatsapana an'izao tontolo izao ao anatin'ny chess. Phiona Mutesi, Ogandey iray avy any an-tsambo, nianatra hilalao chess indray andro raha nitady ...
Patricia Cowings dia vehivavy amerikana afrikana lehibe iray. Izy no vehivavy voalohany nanao fanamoriana astronoma NASA. Na dia tsy miala amin'ny ...
Sandrine Ngalula Mubenga, mpamorona ny fiara hybrid
Teraka tao amin'ny DRC, i Mubenga dia narary mafy tany Kikwit ary ny asa izay natao hamonjy ny ainy tamin'ny 17 taona dia naato tamin'ny fahatongavan'ny mpamokatra. Noho izany, izy ...
Foundation Afrikhepri de Whitney: Ny zo tokony ho ahy - antontan-taratasy (2018): "Whitney, mpihira lehibe… Fiadanana ho an'ny fanahiny!" Jul 12, 16:07
Foundation Afrikhepri de Mpanorina ny tontolo taloha - Tahirin-kevitra (2019): "Tena isika ve ny sivilizasiona mandroso voalohany eto an-tany?" Jul 12, 15:55
Foundation Afrikhepri de Ny fitsaboana tsara tarehy avy any Sahara: "Ny ronono labiera dia ampiasaina amin'ny savony, fa misy koa menaka, fikolokoloana volo, fiarovana ny masoandro" Jul 11, 19:55